यी ४ राशिका व्यक्तिहरु मित्रता कायम गर्न जान्दैनन् , कतै तपाई पनि पर्नुभयो कि ? – SUDUR MEDIA
August 10, 2021 AdminLeaveaComment on यी ४ राशिका व्यक्तिहरु मित्रता कायम गर्न जान्दैनन् , कतै तपाई पनि पर्नुभयो कि ?
काठमाडौँ । एक राम्रो मित्र सधैं राम्रो र नराम्रो समयमा हुन्छ। तर वर्तमान समयमा अधिकांश मानिसहरूले भलाईको पाना ढाकेका छन्। धेरै साथीहरू छन् जो जीवन भर सँगै बस्छन् जबकि केहि बीचमा हात छोडिदिन्छन।
आजकल साथीहरूसँगको मित्रता गुमाउनुको कारण व्यस्त जीवनशैली र बोलचालीको अभाव हो। यो भनिन्छ कि घनिष्ट मित्रता बनाउन भन्दा मित्रतालाई कायम गर्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै केही राशि चिन्हहरू ज्योतिषशास्त्रमा उल्लेख गरिएका छन्। जो मित्रता कायम राख्न धेरै नराम्रो मानिन्छ। यी राशि चिन्हहरूको बारेमा जान्नुहोस्:
१. मेष : ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मेष राशिको जातक जिद्दी र कडा स्वभावका हुन्छन्। यी आत्म-केन्द्रित भएको कारण, धेरै चोटि साथीहरूलाई वेवास्ता गर्दछ। उसको ठूलो बन्ने स्वभावले साथीहरूलाई पनि चिन्तित तुल्याउँछ। जसको कारण उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रन पुग्छ।
२. वृष राशि : भनिन्छ कि यस राशिका मानिसहरूलाई नयाँ व्यक्तिहरू भेट्न र साथीहरू बनाउन मन पर्छ। तर केही समय पछि तिनीहरू आफैंसँग समय बिताउन थाल्छन्। जसका कारण साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया हुदैन । एक्लै बस्ने र गोप्य राख्ने बानी सबै मानिसहरूलाई मन पर्दैन ।
३. कर्कट राशि : ज्योतिष अनुसार कर्कट राशिका मानिसहरूको स्वभाव मूडी हुन्छन्। यी राशिलाई छिट्टै सानातिना कुराले पनि ठेस पुग्न सक्छ जुन मित्रहरूले ठट्टा गरेर भनेका हुन्छ्न्। ऊ आफ्नो कुरा फेर्न पनि सिपालु हुन्छन। धेरै प्रकारका चीजहरू एक पटकमा उनीहरूको दिमागमा भइरहन्छन्। जसको कारण उनीहरूको सम्बन्धमा दूरीहरू आउदछ।
४. सिंह राशि : सिंह राशिफलको राशि कसैलाई पनि आफ्नो अगाडि राख्न सक्दैन। यो बानीले साथीहरूलाई चिन्तित तुल्याउन सक्छ र तिनीहरूले एक्लो महसुस गर्न सक्छ। सिंह राशिफलका मानिसहरू इमान्दार र सत्यवादी हुन्छन्।